လန်ဒန်ကနေပဲရစ်ကိုပြေးတဲ့ရထားဟာဥရောပရဲ့အမြန်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်. Eurostar ကလည်ပတ်သည်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှပြင်သစ်သို့ ၂ နာရီနှင့် ၁၆ မိနစ်အတွင်းသင်ကိုယ်တိုင်ရနိုင်သည်. ၎င်းသည်သင့်ကိုအိပ်ရန်အချိန်လုံလောက်စေသည်, ရထားကိုယူ။ တစ်ပျော်မွေ့ ပြင်သစ်မြို့တော်သို့တစ်ရက်ခရီး. တစ် ဦး baguette ဖမ်းပြီးနှင့် Louvre လှည့်လည် – သို့မဟုတ်ပဲရစ်ကမ်းလှမ်းသည့်အလှအပအားလုံးကိုခံစားပါ.
ရောမအကြောင်းပြောပြီးပြီ, ဒါပေမယ့်မီလန်အီတလီအတွက်အခြားအံ့သြဖွယ်မြို့တမြို့. ပန်းသီးသည်လိမ္မော်သီးနှင့်အီတလီတောင်ပိုင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်, မီလန်သည်ခေတ်မီကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်း၏အဆင့်မြင့်ဖက်ရှင်နှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာအဖြစ်အပျက်များကြောင့်လူသိများသည်, အီတလီသည်မည်သည့်အီတလီအားလပ်ရက်တွင်မဆိုရပ်နားရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ရာသီဥတုအတော်လေးမြေထဲပင်လယ်ကဲ့သို့မဟုတ်နေစဉ်, သင်နေဆဲခံစားနိုင်ပါတယ် လှပသောဗိသုကာ ယခုနှစ်မည်သည့်အချိန်တွင်ပင်ပြတိုက်သို့မဟုတ်နှစ်ခု.
မည်သည့်ဥရောပအားလပ်ရက်အတွက်မဆိုလိုအပ်သည်, ဟမ်ဘာ့ဂ်နှင့်ကိုပင်ဟေဂင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်သင်၏စိတ်ကိုစတင်ပေါ်ပေါက်စေသောပထမဆုံးမြို့ကြီးများမဖြစ်နိုင်ပါ. ဒါရှက်စရာပါပဲ, သော်လည်း, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြို့ကြီးနှစ်ခုစလုံးဟာသမိုင်းကြောင်းနှင့်ရောင်စုံတူးမြောင်းများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်. ဟမ်းဘတ်သည်ဂျာမနီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိဆိပ်ကမ်းမြို့ကြီးဖြစ်သည်. ၎င်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုကြောင့်သင်ယခင်ကကြားဖူးခဲ့ဖူးသည် ထူးခြားသောလူကြိုက်များသောအစားအစာ ဟမ်ဘာဂါ. ပျော်စရာတကယ်တော့ – Hamburg မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်း Hamburgers လို့ခေါ်တယ်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ဥရောပရထားလမ်းကြောင်းမြေပုံလမ်းညွှန်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/europe-train-route-maps-guide/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
EuropeTraveling eurotrip longtrainjourneys TrainRoutes ရထားခရီးသွား travelinspiration tripinspiration